Ungasombulula njani ufakelo lweWhatsApp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Indlela yokusombulula ufakelo lweWhatsApp?
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 281
Xa sifuna ukufaka usetyenziso, sihlala sisiya kwivenkile yesicelo esinayo kwisixhobo sethu kwaye siyikhangele khona. Ngelixa kuyinyani ukuba le yeyona fomu iphambili ye- faka usetyenziso kwiselfowuniNgokuqinisekileyo ayisiyiyo kuphela kwendlela.
Sithanda ukukholelwa ukuba iVenkile yokudlala kunye neVenkile yeApple zizo kuphela iivenkile ezisetyenziswayo phaya. Akukho nto iqhubekayo kwinyani kunale, kuba zininzi ezinye iivenkile zeeapps ezilungileyo kwaye ungade uthi ngcono.
Kodwa inqaku apha kukuba sifuna ukukucacisela ungayifaka njani i-WhatsApp kwiselfowuni yakho. Ke ngoko, siza kukunika ezinye iindlela onokuzisebenzisa xa unengxaki xa uqhuba i-PlayStore okanye ukuba unenguqulo yeWhatsApp yakutshanje.
Uyifaka njani i-WhatsApp ngendlela eqhelekileyo?
Ngokwesiqhelo sithetha ukuba uza kwenza ufakelo ukusuka kwifayile ye- Ivenkile yesicelo onayo kwiselfowuni yakho. Ukuba iVenkile yokudlala, unokuyisebenzisa. Kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba nokuba yeyiphi na insiza onayo okanye oyikhethileyo, inkqubo iyafana.
Kule meko, unokukhetha ezimbini:
Vula iVenkile yokudlala kwaye ukhangele usetyenziso ngaphakathi kwayo.
Sebenzisa nasiphi na isikhangeli kwaye ukhangele i-WhatsApp epapashwe kwifayile ye- iphepha elisemthethweni lePlayStore
Le yokugqibela yenziwa kunqabile okoko iVenkile yokudlala inenkxaso yamaphepha ewebhu. Oko kukuthi, inenguqulo yewebhu. Ngolu khetho, unethuba lokukhuphela usetyenziso kwibhrawuza efanayo okanye uyikhuphele ngokunqakraza kwiqhosha elithi "vula usetyenziso".
Luluphi olunye ukhetho onalo ukuba ufuna ukukhuphela i-WhatsApp?
Olunye ukhetho onokuthi ulusebenzise ukulawula ukufaka i-whatsappKungenxa yekhompyuter nakwiselfowuni efanayo. Ukwenza oku, kuya kufuneka usebenzise nasiphi na isikhangeli.
Masithelekelele okomzuzwana usebenzisa indalo yeselfowuni yakho. Xa ukhangela i-WhatsApp, kuya kufuneka uyenze ngendlela yokuba ekugqibeleni kufuneka ukongeze kuyo. APK. Oko kukuthi, xa usiya kubhala ukufumana usetyenziso, kuya kufuneka uyenze ngale ndlela ilandelayo: "Whatsapp APK".
Ngokwenza oku, uxelela isikhangeli ukuba sikubonise la maphepha akuvumela ukuba ukhuphele usetyenziso kwifomathi ye-APK. Kwimeko apho ungazi, le yifomathi yefayile exhaswa kuphela kwiifowuni eziphathwayo ze-Android.
Nje ukuba uyifakile, uza kudibanisa iselfowuni kwikhompyuter yakho, uza kukhangela ifayile kwifolda yokukhuphela kwaye uza kuyithumela kwindawo onokuyenza Khangela kwindawo yokugcina isixhobo sakho.
Nje ukuba ukwenze konke oku, kuxa uza kunqamla iselfowuni kunye uya kujonga ifayile oyigqithile kule. Uya kuqaphela ukuba endaweni yokubonisa njengefayile ethe tyaba, ngoku itshintshele kwi logo yeapp. Uyibaleke kwaye ulandele amanyathelo.
1 Uyifaka njani i-WhatsApp ngendlela eqhelekileyo?
2 Luluphi olunye ukhetho onalo ukuba ufuna ukukhuphela i-WhatsApp?
Meyi 7, 2021
Ungakwenza njani ukubamba kakuhle?
Njani ukuba ungaveli kwi-intanethi ku-whatsapp?